ज्योतिष बिज्ञानको चमत्कार : नाम सुरु हुने अक्षरले बताउछ मान्छेको चरित्र ! - Sitemap
Loading... ज्योतिष बिज्ञानको चमत्कार : नाम सुरु हुने अक्षरले बताउछ मान्छेको चरित्र !
मानिसलाई आफनो नाम सर्वाधिक प्यारो लाग्छ । आफनो नाम अमर र उच्च राख्नका लागि श्रृष्टि कालदेखि नै मानिसले अनेकौं चुनौतीपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ । ज्योतिष बिज्ञानले मानिसको नामबाट मनोबिज्ञान पढ्ने पद्धतिको बिकास गरेको छ । अर्थात तपाईको नाम कुन अक्षरबाट उठेको छ त्यो हेरेर आफ्नो चरित्र आफै छुट्याउन सक्नुहुन्छ ।
तल मादीको किनारबाट उभो फर्केर हेर्दा पिरामिड जस्तो गरा माथी गरा थपिदै गएर आकाशको उचाईमै यसको अन्तिम पिरामिड स्थापना भए झै लाग्थ्यो। केहि बर्ष अगाडी सम्म पनि यो सुदुर गाउँ कुनै प्यागोडा शैलीमा बनाईएको...